HESHIISKII XUKUUMADDII NUUR CADDE IYO EU ee Dec 13, 2008
Dhammaadkii sannadkii 2008, ayaa heshiis waxaa kala saxiixday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) iyo Midowga Yurub. Waxaa heshiiskaas DFKMG u saxiixay safiirka u fadhiya Nairobi. Sida aan hoos ku arki doono waxaa heshiiskaas la saxiixay xilli aan DFKMG lahayn madaxweyne. Hoos ka akhri wixii heshiiskaas ku qornaa oo Af-Soomaali loo rogey iyo faallo kooban oo ku saabsan heshiiskaasi sida uu xad gudubka ugu yahay xuquuqda qaranimada Soomaalida.
Heshiiskan oo ku soo baxay faafinta rasmiga ah ee Midowga Yurub (Official Journal L 010 , 15/01/2009 P. 0029 - 0034), waa kan:
- Qaraaradii Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay (QM) ee Resolutions 1814 (2008), 1816 (2008) iyo 1838 (2008) iyo qaraarkii ku xigey,
- Warqad ku taariikhaysan 1da November 2008 oo ka timid Ra’iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Kumeelgaarka ah Mudane Nuur Xasan Xuseen ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku socotey Xoghaynta-Guud ee Golaha Midowga Yurub / Wakiilka Guud ee Arrimaah dibadda iyo Ammaanka u qaaabisan EU oo jawaab u ahayd Wadashaqaynta Midowga Yurub ay soo jeediyeen, iyo Warqadda ku taariikhasan 14kii November 2008 oo ah wargelintii ay Dawladda Federalka kumeelgaarlka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo bandhigiddaas ku wargelisay Xoghayaha Guud ee QM,
- Golaha EU ficilkii Wadajir ahaan ay qaateen ee 2008/851/CFSP markay taariikhdu ahayd 10kii November 2008 oo ku saabsanaa Militariga Midoga Yurub hawlgalkooda ku saabsan ka hortagga, caabinta iyo cadaadinta ficillada burcad badeeda iyo burcadda hubaysan ee xeebaha Soomaaliya (Hawlgalka Atalanta)
- In heshiiskani uusan saamayn ku yeelanayn labada dhinac (Somalia & EU) xuquuqdooda iyo waajibadkooda heshiisyada caalamiga ah iyo arrimaah kale ee la xiriira maxkamadda caalamiga ah, oo ay ku jirto xeerka dembiyeedka maxkamadda caalamiga ah
Qodobka 4-aad wuxuu leeyahay waxaa kaliya oo laga rabaa inay wataan calaamada howlgalkaan cusub loo sameeyey ee EUNAVOR oo kaliya, haday calaamadaas wataan waxkale oo laga rabo majirto (Uniform). Lagama doonayo Baasaboor iyo inay wadanka Soomaaliya Visa kusoo galaan ama ku joogaan, sidoo kale waxaa laga dhaafay in hay'ada socdaalku baarto ama waydiiso wax sharci ah iyo dhinaca Custom-ka iyo Xuduuda oo aan wax baaritaan ah ku samayn karin, macnaha qodobkan oo kooban waa waxay ka xuquuq badan yihiin Muwaadinka Soomaaliga ah. Sidaas maxaan u leenahay marka laga yimaado qofka shacabka ah ee Soomaaliga ah, dhamaan qaybaha kala duwan ee Dowlada waxay wadanka uga baxaan Baasaboor Dubamaasi ah, ha ahaadeen Hay'ada fulinta ama Mudanayaasha Baarlamaanka, Xasuusnowna Dowladu waxay qabanayso waa shaqo guud, sida qaalibka ah. Wali lama hayo Sharci sheegaya qofka muwaadinka ah inuu wadankuu doono ha ahaadee uu Baasaboor la'aan, ama Teesaraha aqoonsiga la'aantiis xataa wadankiisa dhexdiisa u kala safri karo. Shaqaalaha howl galkaan loo soo ka xaysto wadankay doonaan ha ahaadeen e waxaa laga dhaafay in magac laga qoro ama la waydiiyo meesha ay ka yimaadeen, wadanka way iska soo gali karaan, meeshay doonaana waa aadi karaan. lama yaqaano waxay ku joogaan, majiraan sharci lasiiyey oo ka dhacaysa, sida Visa-ha Dal ku galka, Daganaansha wadanka ama dhalashada wadanka. Shaqaalaha dhulka Soomaaliya waxay ku wadan karaan nooc kasta oo gaadiid ah Cir, Dhul iyo bad, lagamana rabo wax sharci ah, haday kamid yihiin dalalka qaybta ka ah howl galka, ama wataan shatiyada wadamadooda, sida; kan gaariga lagu kaxeeyo.
Qodobkan shanaad markaad aragto waxaad ilaawaysaa kuwii kasii horeeyey inkastoo uu xoojinayo qayb kamida kuwii aan soomaray. Wuxuu leeyaha Noocyada gaadiidka Midowga reer Yurub lama fiirin karo lamana gali karo meelkasta oo uu joogo, waxaa ka caagan in labaaro Diyaaradahooda iyo Maraakiibtooda, wax su'aal ahna aan lawaydiin, haday xadgudbaana wax dacwad ah lagu soo oogi karin. Waa yaabe dalka yaa iska leh, mawadan Midowga reer Yurub ka mid ah baa, xageese aduunka aan ku noolahay sidaas looga dhaqmaa, waxkasta oo ay wataan waa ka wayn yihiin sharciga waa lama taabtaan, sharci laguma qaadaan. Arintan si fiican u dhuux "Kaydka xogtooda, wada xiriirka howlgalka ee rasmiga ah waa laba taabtaan, xili kasta oo ay ahaato" Taas macnaheedu waa howsha ay u joogaan cid og majirto, haday wadanka sahamin kusameeyaan lama ogaan karo, waxkasta oo kuwada hadlaan iyaga kaliya ayaa is og. Qodobadaan kore markaad akhrido miyaadan qirayn inaan gumaysi galay Qarniga 21-aad, gumaysigana uu qayb kayahay Sarkaal sare oo loo tababaray difaaca Dalka iyo Dadka, Col. Nuur Xasan Xuseen.
Hadaba waxaa hubaal ah in Muwaadinka Soomaaliyeed ee arka qoraalkan madaxu xanuunayo, haduu xanuun horay u qabayna laga yaabo inay dhacdo inuu dhakhtarkiisa arko. Aduunka aan ku noolahay xuquuqda noocaas oo kale ah wax haysta majiraan, iska daa wadan aad ajnabi kutahay oo xaqa aad leedahay aad u kooban yahay, kawaran hadii laleeyahay Muwaadin Soomaaliyeed oo wadankiisii lagu dulmiyey wax xuquuq ah malihid waxaa kaamudan Gumaystahan doolka ah. Hadaba su'aashu waxay tahay maxay tahay danta Soomaaliya ugu jirta Gaashaan buurtan reer Yurub ee wax sharci ah oo qanabaya uusan jirin inay wadankeena xuquuqda intaas leeg ku yeeshaan? Howlgalada noocaan oo kale ah aduunku markuu galayo dan ayuu ugu xishaa, gaar ahaan wadama 3-aad dhaqaale ayey fiiriyaan. Tusaale waxaa ah Jabuuti waxay Saldhig Milatari siisay Maraykanka iyo Qaar kamid ah wadamada reer Yurub, dhaqaale xoog leh ayaa kasoo gala. iska daa wax dhaqaale ah oo nala siiyee waxaa loo saxiixay in Canshuurtii laga dhaafay noocay doonto hanoqotee sida; Shaqaalahooda, qalabkooda, dhaqaalahooda iyo isticmaalka Hawada, Badda iyo dhulka. Su'aasha jawaabteeda waxaan kasugaynaa Nuur Xasan Xuseen oo ahaa Raysal wasaarihii arintaan fuliyey.
Faalladeena waxaan ku bilownay Madaxda Soomaaliya Dowladii Siyaad Barre kadib inay galayeen heshiisyo naxdin leh. Akhristow dib u milicso labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyo hagar daamooyinka ay gaysteen rag sheeganayey masuuliyiin Soomaaliyeed. Xiligii Cali Mahdi Maxamed lagu magacaabay Madaxwayne ku meelgaar ah, wuxuu saxiixay heshiis uu ku ogo'laanayo in Soomaaliya lagu aaso sunta halista ah ee Qarniyaal lagu halaagsamo (Haraaga Nuclear-ka ) isagoo xeeriyey xiriir wanaaga loobahan yahay in lala yeesho wadamada Sunta aasaya. Xaafuun 100-sano -2004/2005 oo ay madaxdii Puntland isku dayeen in ay ay u dhul Soomaaliyeed XAAFUUN u saxiixaan Kambanigii HAFZA, C/laahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi Soogalintii Ciidamada cadowga Itoobiya Caasumada Dalka Soomaaliya iyo u ogolaanshahoodii in Calanka Itoobiya ay kala taagaan Madaxtooyada Soomaliya,(gurii uu daganaanjiray Madaxwayne ku xigeenkii Soomaaliya Ismaaciil Cali Obokor), Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cade) Saxiixida heshiiska aan ugu magac bixinay Gumaysiga reer Yurub ee qarniga 21-aad ee uu lagalay EUNAVFOR kuna duudsiyey Muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisii, ogolaadayna in wadankiisa lagu gumaysto, hadaan si kale u dhignana la oran karo wuxuu dhaxal wareejiyey Qaranimadii Soomaaliyeed. Sidoo kale Sheekh Shariif Sh. Axmed iyo Cumar C/rashiid oo saxiixay heshiis Soomaaliya ay ku waayi karto 116000km2 oo dhul baddeed, Dowlada Kenya oo Soomaaliya ka haysata NFD u ogolaanaya inay qaadato oo ku darsato dhulkay horay u haysatay 116000km2.
Economic Exclusive Zone (EEZ) -Aagga Gaarka ah ee Ganacsiga - waa aag dalka xeebta leh ka kalluumaysan karo. Badanaa wadammada badaha leh cabbirka EEZ waa 200 mayl badeed waxaana hadda la qorshaynayaa in laga dhigo 350 mayl badeed.
Internatioanl Waters / High Sea (Bad weyn) - bad caalami ah oo dad ka dhexayse ah. Waa wixii ka baxsan Territorial, EEZ waters.
Madaxweyne Aaden Cabdulle Cusmaan (Aaden Cadde) (madaxweynahii Soomaaliya intii u dhaxaysay 1 July 1960 - 10 June 1967) oo ahaa madaxwaynihii ugu horeeyay ee ay Soomaali yeelato ayaa ka caddayay shirkii Ururka Midowga Afrika ay ku yeesheen magaalada Qaahira sannadkii 1964, isaga oo sheegay Soomaali marnaba in aanay ogolaanayn XUDUUD-BEENAADKA la dhex dhigay dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale ra'iisul Wasaarihii Soomaaliya mudane Cabdirisaaq Xaaji Xuseen (Ra'iisul wasaarahii Soomaaliya intii u dhaxaysay 14 June 1964 - 15 July 1967) ayaa sannadkii 1966 sheegay in dastuurka Soomaaliya dhigayo raadinta iyo u dagaalanka xorriya dadka Soomaaliyeed ee aan loo ogolayn in ay ka tashadaan aayahooda, hadaladiisiina waa ka mid ahaa: "Dastuurka Soomaalida waxaa la galiyay in dawlad kasta oo Soomaaliya in ay khasab ku tahay in ay raadiso wadannada maqan, in la isku soo daro, oo ay uga shaqayso si nabad ah. Siyaasadda dibadda ee dawladda Soomaalida tiirkeeda koowaad wuxuu ahaa sidii lagu heli lahaa wadanada Soomaalida oo maqan sidii xuquuqdooda loo heli lahaa, ayuu ahaa. Markaa waxa alla iyo wixii meel la isugu yimid, oo ururo ah oo dibad ah, ilaa waqtigaa OAU ma jirin, meel Qarammada Midoobay (UN) haddii la ogolaan karay iyo meelahii kale oo la isugu tegey, xukuumadda Soomaalidu marna dib ugama dhicin in ay ku dhawaaqdo xaqa ay leeyihiin wadannadaas maqan in loo ogolaado codkooda in ay dhiibtaan. Hadal meel kasta oo Forum ah, oo la isugu yimaado, oo suuragal ay noqon kartay xukuumadda Soomaalidu aad bay ugu dadaashay, taasi waa dibaddii. Gudahana ummadda Soomaalidu sidaas ayay rumaysnayd, xukuumadda Soomaaliduna aad iyo aad bay marwalba ugu dadaalaysay in dadwaynaha Soomaalidu ay ku baraarugsanaadaan fikraddaas iyada ah ayaa lagu dadaalayay."
Janaraal Maxamed Siyaad Barre (madaxweynahii Soomaaliya intii u dhaxaysay 21 October 1969 - 27 January 1991) oo madaxweyne ka ahaa Soomaaliya muddo 21 sano ah waxa uu yiri: "Adduunka qoomkii kasta oo joogaa madax ayay leeyihiin, haddii madaxdaasu wax daran ay ugu guddoomiso markii madaxdaasu ay tagto oo ay dhimato magac xumo ayay ka tagaan, habaar ayaa laga daba diraa, cay ayaa laga daba diraa, kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxaa xun noogu guddoomiyeen ayaa qoomkaasi yiraahdaa ama shacbigaasi yiraahdaa. Haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ka shaqeeyeena magac wanaagsan ayay ka tagaan, dadku waa ku mahadiyaan, wanaag bayna ku xusuustaan. Waxaan anigu taas ka leeyahay Ilaahay ayaa xukmay annaga iyo Itoobiya iyo Kenya in aynu ku noolaano Geeska Afrika, inaguna hadda waa ku nool nahay, shaki kuma jiro qoomka inaga dambeeyana meesha ayay ku noolaan doonaan. Marka wax tirtiri karaa ma jiraan. Haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexdaa dawladood, ma inaan wax daran u guddoomino dadkanagii oo isku laynaa mase waa inaanu garano oo wixii dhex yaal ay si fiican inta ay uga tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo deris ah oo caddaalad ah wixii iskaga qasan in ay ku qabsadaan miyaa?
Cabdillaahi Suldaan Maxamed "Timacadde", oo noolaa intii u dhaxaysay (1920-1973). gabaygaas oo ahaa:
Bishii October 2008 ayaa Ergeyga Gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Axmed Walad Cabdalla waxa uu bilaabay ama uu lahaa asaaskii diyaartii akhbaarta Soomaaliya ee la xiriirta cabirka badda ee Qalfoofka Qaaradda wixii ka durugsan 200 mayl badeed. Waxaa xilliyadaas soo shaac baxayey khilaaf ku kala dhex jirey xukuumadda FKMG, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha.
November 1, 2008 ayaa ra'iisul wasaarahii DFKMG Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) waxa uu warqad u diray Midowga Yurub qaybta u qaabilsan Arrimaha Dibadda, ammaanka iyo siyaasadda, warqaddaas oo jawaab u ahayd wada shaqayn ay reer Yurub usoo bandhigeen. Waxaana taas ku xigtey warqad wargelin ah oo Dawladda Federaalka Kumeelgaarka ay November 14, 2008 u dirtay Xoghayaha Guud ee QM.
Shaqada ugu Muhiimsan ee dad badan hada qaban karaan waa in cidkasta oo awood u leh inay wax qorto ama baaritaan samayso ama xoghaysa inay is xilqaanto oo fadhiga laga kaco, maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa "Nimaan hadlin Hooyadiis Qadisay". Sidoo kale waxaa layiraahdaa "Aamusidu waa aqbalaad" Hadii lahadlo laba faa'iido ayaa lagaarayaa a) Mida koowaad waa In ummadda la wacyi galiyo, ummaduna ay barato waxa kamaqan ama ay diidantahay, markaasna ay aqoon ku doodo. b) Arinta labaad waa in Cadowgaagu ogaado inaadan hurdin aadna ogtahay waxa lagula maagan yahay, iyo in Kayd Taariikheed loo reebo jiilasha soo socda. Fadhiga halaga kaco "Cidna uma maqna Ceelna uma qodna".
Ing Maxamed Cali Iyo Xasan Dhooye
Sheikh Shariif vs Axdiga TFG: Madaxweynaha DFKMG Shariif oo Xilku kaga egyahay October 14, 2009, sida uu dhigayo Axdiga DFKMG? Akhri....